कोरोना बीमाको भुक्तानी नमिल्ने ! « Ok Janata Newsportal
कोरोना बीमाको भुक्तानी नमिल्ने !
काठमाडौं । नेपाल सञ्चालिन लाइफ र ननलाइफ इन्स्योरेन्सले ल्याएको कोरोना बीमा पोलिसी फेल भएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न असहज भएको छ ।
अनुदान रकम पाउनु र नपाउनु बिमितसँग सम्बन्धित विषय नभएको र यो सरकार र बीमा समितिसँग सम्बन्धित विषय भएको बीमा विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यसैले कम्पनीहरूले कुनै पनि बहानामा कोरोना बीमाको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने देखिन्छ । सात दिनमा भुक्तानी गर्छौं भन्ने बीमा कम्पनीहरुले अनुदान रकम कुराउनु भनेको बिमितलाई झुक्याउनु मात्र भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि अनुदान रकम आउन केही समय लाग्ने भए पनि दाबी भुक्तानी भने समयमै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूले हामीलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउँछन् ।
सोही आधारमा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग अनुदान रकम माग गर्छौँ’ उहाँले भन्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई अनुदान रकम प्रदान गर्नेछ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले समितिले कोरोना बीमा पुललाई रकम भुक्तानी गर्ने बताउनु भयो ।
गत बुधबारसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ लाख ४५ हजार ५ सय ७० वटा कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेका छन् । जसबापत कम्पनीहरूले ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरिसकेका छन् । जसमध्ये कम्पनीहरूले ८७ वटा निःशुल्क अनुदान बीमा पोलिसी जारी गरेका छन्  । सो अवधिसम्ममा कम्पनीहरूले ८ सय १७ वटा दाबीबापत ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।